RoboCam သည်သင့်ကိုဖမ်းယူလိမ့်မည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » RoboCam သင် Capture မည်!
ကင်မရာများဆွေးနွေးခြင်းသောအခါ, အကြောင်းအရာများများသောအားဖြင့်သူတို့အားမှန်ဘီလူးကိုဖြည့်ဒါမှမဟုတ်တချို့ဖက်ရှင်အတွက်ပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီမှန်ဘီလူးသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်းနစ်အာရုံစိုက်ပါ။ ကင်မရာ၏ဆွေးနွေးမှုကိုလည်းကင်မရာမိုက်ခရိုဖုန်းအကြောင်းပြောနေတာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်; ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်သဘာဝကျကျပစ္စည်းကိရိယာများ၏စစ်ဆင်ရေးကြောင့်အပိုင်းအစဘယ်လောက်တိတ်ဆိတ်သို့ segue ပေလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုပိုပြီးရခဲ (အာရုံစူးစိုက်ကျော်လွန်ပြီး) အပေါ်သို့ထိမိသောကင်မရာကိုသူ့ဟာသူ၏လှုပ်ရှားမှုသည်နှင့်ဘာသာရပ်သို့ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာစူးစမျးတဲ့သူ့ဟာသူကင်မရာများ၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
Panasonic ကရှိသော်လည်း AW-HE 120
စက်ရုပ်ကင်မရာများဖြစ်စေဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ထားသို့မဟုတ်အလိုအလျောက် (သို့မဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်) နှင့်ကြိုးမဲ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်လုပ်နိုင်ပါတယ်နေကြသည်။ စက်ရုပ်ကင်မရာများတိုး၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းသကဲ့သို့, လွန်း, စတူဒီယိုနှင့်လုံခြုံရေး / စောင့်ကြည့်မှုမှာ / ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုပါဘူး။ တဦးတည်းလက်ရှိကြုံတွေ့ရမယ်စက်ရုပ်ကင်မရာအသုံးအများဆုံးမျိုးစုံအတွက် PTZ (ဒယ်အိုး-tilt-zoom ကို) ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သောကြီးမားဌာနစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားရုံအဖြစ်တစ်ဦးစတူဒီယို setting ကိုတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပိုင်ဆိုင်မှုမှာတွေ့ရှိရသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာမှာအတွက်လူတိုင်းနီးပါးတစ်ဦးအမိုးခုံးသို့မဟုတ် 'မျက်စိ-in-the-ကောင်းကင်ပြာ' 'ကင်မရာကိုမမြင်စဖူး။ အားလုံးအမိုးခုံးကင်မရာများသို့သော်စက်ရုပ်တွေကမရ; ပုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ / စက်ရုပ် options များစျေးနှုန်းအကွာအဝေး၏အထက်ဆုံးရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပေါ်လာဖို့စတင်။
လုံခြုံရေးကင်မရာများ, အမိုးခုံးမြေမှုန့်ထဲကနေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး, မိုးရွာရွာ, သူတို့ရဲ့လေ့လာရေးကျော်လွှားဖို့ရှာကြံ Vandalic ခြင်းဖြင့်မင်ဖျက်ဆီးခြင်းထဲကကင်မရာကိုကိုယ်တိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအချို့ကိုဒီဂရီနှင့်အတူပျံသန်းအင်းဆက်ပိုးမွှားသည်။ (ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမည်ဆိုးစျေးပေါလျှင်သို့မဟုတ်အားလုံးကို) အဲဒီထူးခြားတဲ့အနက်ရောင်အမိုးခုံးများအနည်းငယ်ယုံကြည်သို့အချို့သောအလားအလာသူခိုးတွေဖြားခြင်းအားဖြင့် CCTV လုံခြုံရေးစနစ်၏အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေသောအချည်းနှီးဖြစ်သောကြောင့်အချို့ကိစ္စများတွင်အမိုးခုံး, အဖြစ်ကောင်းစွာလှည့်စားပေးသည် တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဧရိယာစောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာရှိနေပါတယ်။ PTZ ကင်မရာများသည်အလွန်တဦးတည်းတစ်ဦးချင်းစီဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်မျိုးစုံနေရာများမှာမျိုးစုံကင်မရာများလုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ကင်မရာအော်ပရေတာများ၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်။
Lumens VC ကို-G50
တချို့ကစက်ရုပ်ကင်မရာများအပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ဖြစ်ကြပြီးအခြားသူများကို set-တက်စေခြင်းငှါအနေဖြင့် (က ပို. အသုံးဝင်မယ့်စတူဒီယိုအဘို့ဖြစ်သော) လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းလိုက်ရန်, (အများဆုံးလုံခြုံရေးကင်မရာများနှင့်အတူကြုံတွေ့) အစုတခုလှုပ်ရှားမှုပုံစံလိုက်နာပါ။
မူလကအလိုအလျောက်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုရွေ့လျားမှု detectors အ, ကွန်ပျူတာများနှင့်ကင်မရာများပေါင်းစပ် thru ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ထို့နောက်တစ်လျှောက်တွင် Auto-ခြေရာခံခြင်း, အ pixels ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပုံရိပ်၏ပွောငျးလဲဘို့ပုံစင်တာတစ်ခုကို firmware ကိုအစီအစဉ်တွင် built တစ်ဦး လာ. , ဒါဟာထို့နောက်လှုပ်ရှားမှု / ပုံပျက်၏ဧရိယာအပေါ်ဗဟိုအာရုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကတော့ PTZ အသုံးပြုသည်။ ပိုကောင်းတဲ့အာရုံအဘို့, firmware ကိုပရိုဂရမ်ဟာပုံပျက်နှင့်ပုံပျက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု approximating ကပိုမိုထိရောက် Auto-focus နှင့်ချောမွေ့လှုပ်ရှားမှုအားဖွင့်ခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရုပ်ပုံဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဖြင့်အရာဝတ္ထုစုစုပေါင်းရဲ့အရွယ်အစားနှင့်မြန်နှုန်းအဖြစ်ကင်မရာကနေသူ့ရဲ့အကွာအဝေး, ခန့်မှန်း နှင့်ဒုံးကျည်သွားလမ်း။ အဆိုပါပုံပျက်မြင်ကွင်းကင်မရာ၏လယ်မထွက်ထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့ (၎င်း၏ပရိုဂရမ်းမင်းပေါ် မူတည်. ) ကသော်လည်းကောင်းအရာဝတ္ထုများ၏ထွက်ပေါက်အမှတ်စောင့်ကြည့်နေဆဲအာရုံ၎င်း၏ယခင်ဧရိယာမှပြန်လည်ရောက်ရှိ, သို့မဟုတ်၎င်း၏ Pre-ပရိုဂရမ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံ recommences; ဤအချက်မှာကင်မရာလည်းနောက်တော်လိုက်ရန်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်နောက်တဖန် '' စောင့်ကြည့် '' ကစတင်ခဲ့သည်။ (သင်အလိုတော်ရှိလျှင်သို့မဟုတ် 'သဘောသဘာဝစောင့်ကြည့်') အလိုအလျောက်ကင်မရာများလည်းဝေးလံသောနေရာများတွင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏သဘာဝရဲ့လေ့လာရေးများအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။
PTZ ကင်မရာဥပမာတစ်စုံတွဲတွေဟာ: အ Lumens VC ကို-G50 High Definition PTZ ဗီဒီယိုကင်မရာနှင့် Panasonic တို့ရှိသော်လည်း AW-HE120 ။ အဆိုပါ Lumens VC ကို-G50 ကင်မရာစပိုင်းတွင် video conferencing များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်နေစဉ်, က applications များအမျိုးမျိုးမှချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လွှမ်းခြုံ၏အံ့သြဖွယ်လယ်ပြင်နှင့်အတူ, ဒီကင်မရာရဲ့ဒယ်အိုးထောင့်ကလုနီးပါးတစ်ခုလုံးကိုအခန်းတစ်ခန်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်အရာကို + 170 °မှ -170 °ကနေလာနေကြပါတယ်; -30 ကနေတိမ်းစောင်းပ္ပံ + 90 ဆင်း°ကင်မရာ Right-side-တက် (ပြောင်းပြန် mounting လည်းပုံရိပ်လှန်နဲ့အတူဖြစ်နိုင်) တပ်ဆင်ထားသည့်အခါတက်°။ 20x optical zoom နဲ့ကြည့်ရန်တစ် 60 ° Angle နဲ့ပေါင်းစပ်နှင့်တစ်ဒါဇင်နဲ့အခြား features နဲ့သင်တစ်ဦးတော်တော်လေးချိုမြိန်အမြင်ရှိသည်။
တိုက်ရိုက်နဲ့ Web-based IP ကိုဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးကို support သော Panasonic ကရှိသော်လည်း AW-HE120 ဖြစ်ပါသည်တဦးတည်းသော - Panasonic ကရရှိနိုင်ပါ PTZ ကင်မရာများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ယင်း၏အစာရှောင်ခြင်း 20X zoom ကိုမှန်ဘီလူးနဲ့သုံး 2.2-megapixel ULT MOS image အပြည့်အဝထောက်ပံ့နှင့်အတူ HD ဗီဒီယိုရိုက်ခြင်း, AW-HE120 စောင့်ကြည့်, သတင်း, ကိုးကှယျမှု, အားကစားနှင့်ဇာတ်စင်မှတ်တမ်းတင်အသုံးပြုမှုများအတွက်ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာ 16-ဝင်ရိုးအရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ထားကြားနေသိပ်သည်းဆ filter များ, DRs, ရှပ်တာနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာပစ်ခတ်မှုအခြေအနေများ၏ကျယ်ပြန့များအတွက်အကောင်းဆုံးထိတွေ့မှုဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ 100 ကြိုတင်ရာထူးကျော်သိုလှောင်နှင့်မှတပါးတစ်ဒါဇင်ကျော်အပိုဆောင်း features တွေရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
Fixed တည်နေရာစက်ရုပ်ကင်မရာများဆက်ဆက်အသုံးဝင်ပေမယ့်စက်ရုပ်ကင်မရာကိုလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလာမယ့်ခြေလှမ်း (စာသား) အနေနဲ့အော်ပရေတာအနေဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မရှိဘဲ၎င်း၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ့်ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း, စိတ်ထဲပေါက်, ကိုလှိမ့တက်ပြီး, ပျံများနှင့်ယခုကင်မရာစီးအနင်းပစ္စည်းရေကူး။ အဲဒီမှာဖြစ်နိုင်ခြေကိုများစွာသောလူရှိပါတယ်စသည်တို့ကိုချင်ပန်ဇီမျောက်, ထီးတပါး, လင်းပိုင်, ကြီးမားသောငှက်များ, ဒါမှမဟုတ်အားကစားသမား: ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ထားကင်မရာများလည်းကဲ့သို့သော, ကင်မရာသူ့ဟာသူလည်ပတ်ပါဘူးတဲ့ဇီဝဗေဒလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွဲနိုငျသညျ။
ပျံကင်မရာများကိုစျေးကွက်အပေါ်ပြီးသားဖြစ်၏ ချုံ့ခြင်းနှင့်လေခွင်းဒီဇိုင်းအတွက်နောက်ထပ်တိုးတက်လာသည်ဤတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလွန်သေးငယ်သောပျံစက်ရုပ်တွဲအလွန်သေးငယ်သောကင်မရာများစိတ်ကူးဖို့ခက်လွန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အင်းဆက်ပိုးမွှားစက်ရုပ်ပျံသန်းမြောက်မြားစွာကောလိပ်များအားဖြင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်စမ်းသပ်မှုအတွက်ပြီးသားဖြစ်ကြသည်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်များအစိုးရကပြီးသားအများပြည်သူအပေါ်စူးစမ်းအင်းဆက်ပိုးမွှားစက်ရုပ်ကင်မရာများရှိပါတယ်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်လျှင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာကိုယခုတိုးတက်လာအဖြစ်, သင်ပျံသန်း Nano-ကင်မရာယငျရဲတို့ပြီးသားအစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြပါလျှင်မ။ ယုံကြည်ဖို့တစ်သံဖြူသတ္တုပြားဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထားခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး
အကြောင်းအရာ Lumens ပေါင်းစည်းရေး Inc က
Lumens ™ပေါင်းစည်းရေး Inc ကို Ladibug ™ခရီးဆောင်စာရွက်စာတမ်းကင်မရာများနှင့် PTZ video conferencing ကင်မရာများ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် image processing တွင်, optical နည်းပညာနှင့်ဗီဒီယိုအီလက်ထရွန်းနစ်၏နက်ရှိုင်းတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအမွေအနှစ်ရှိပါတယ်ခဲ့သည်။ Lumens ™ထုတ်ကုန်သံသရာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းအလွန်အရေးပါမှုသက်ဆိုင်ပါသည်။ စစ်ဆင်ရေးကနေအာမခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု။
မြောက်အမေရိက၏ Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်းစားသုံးသူ, စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ကျယ်ပြန့်လိုင်းပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအိုဆာကာ, ဂျပန်-based Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် Panasonic ရဲ့အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်, စျေးကွက်, အရောင်း, ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ R & D ကိုစစ်ဆင်ရေး၏အချက်အချာ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးမြောက်အမေရိကလက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် Interbrand ရဲ့ 2014 "တွင်အကောင်းဆုံးကို Global အစိမ်းရောင်အမှတ်တံဆိပ်"အစီရင်ခံစာ, Panasonic ကအဆင့်အရေအတွက်ကိုငါးခုခြုံငုံနှင့်အစီရင်ခံစာအတွက်ထိပ်တန်းအီလက်ထရွန်းနစ်အမှတ်တံဆိပ်။ ရေရှည်တည်တံ့မှုအားထုတ်မှုဆက်လက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မြောက်အမေရိက၏ Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်း Newark အတွက် Newark Penn ဘူတာကပ်လျက်အသစ်တစ်ခုကိုစက်ရုံ, NJ ရန်၎င်း၏ဌာနချုပ်ပြောင်းရွှေ့။ ဒါဟာအမေရိကန်အစိမ်းရောင်အဆောက်အဦးကောင်စီထံမှ Leeds ပလက်တီနမ်နှင့်ရွှေအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းနှစ်ဦးစလုံးဝင်ငွေမှ Newark အတွက်ပထမဦးဆုံးအသစ်ဆောက်လုပ်ထားရုံးမျှော်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ Panasonic ကမှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ panasonic.com/pressroom
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ High Definition PTZ ဗီဒီယိုကင်မရာ ဆေးရုံ Lumens VC ကို-G50 စောင့်ကြည့်မှု ဒယ်အိုး-tilt-zoom ကို Panasonic ကရှိသော်လည်း AW-HE120 လုံခွုံရေး 2014-12-21
ယခင်: Digigram IQOYA * LINK IP ကိုပေး Audio-ကျော်-IP ကိုပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဝေဖန်မြှုပ်ထားသောဖြေရှင်းချက် 2014 ဂုဏ်ပြုရရှိ
နောက်တစ်ခု: အဖော်မွန်ခရီးသွားပစ္စည်းကိရိယာမြား: A ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ